ဇာဂရက်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ Sisak မြို့တွင် ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် ပျက်စီးသွားသည့် မော်တော်ယာဉ်များကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Marin Tironi/Pixsell via Xinhua)
ZAGREB, Dec. 29 (Xinhua) -- A strong 6.4 magnitude earthquake jolted Petrinja,asmall city about 50 km southeast of the Croatian capital Zagreb, at 12:19 p.m. local time (1119 GMT) on Tuesday, the European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) said.
European Commission President Ursula von der Leyen said that the European Union (EU) will support Croatia. On Tuesday she tweeted: "We are ready to support... We stand with Croatia." Enditem
မင့်စ်ခ် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန်/စိုးမိုး
အမေရိကန်နိုင်ငံ က ဘီလာရုစ် နိုင်ငံမှအချို့သော နိုင်ငံသားများ နှင့် လုပ်ငန်းရှင်များအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် ဘီလာရုစ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် တန်ပြန်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘီလာရုစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန က ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် ၌ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ဗီဇပြောင်း COVID ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်တွေ့ရှိသဖြင့် ဒေသအတော်များများ၌ အတင်းကြပ်ဆုံးကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်
လန်ဒန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
ပဲရစ် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန်/စိုးမိုး
ပြင်သစ်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာများ၏ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် ဖော်ပြချက်အရ ယခုအကြိမ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ယူရို သန်း ၂၀၀ တန်ဖိုးရှိ ထီဆုကြီးကို ပြင်သစ်နိုင်ငံသား တစ်ဦး က ဆုမဲပေါက်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ယင်းထီပေါက်သူက ဆုကြေးငွေ၏ အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ရပ်ထူထောင်ကာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ထမ်း နှင့် ဆေးရုံများကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
လီမာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
ပီရူးနိုင်ငံ အစိုးရသည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဖျားနာမှုလက္ခဏာကို ဖြေရှင်းပြီးနောက် China National Pharmaceutical Group သို့မဟုတ် Sinopharm မှထုတ်လုပ်သော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများ ပြန်လည်စတင်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Pilar Mazzetti က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘရပ်ဆဲလ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
တရုတ်နိုင်ငံသည် အောက်တိုဘာလအထိ ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) ၏ ထိပ်တန်းကုန်သွယ်ဖက်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း Eurostat က ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။